Saya – Page5– HlaMin
Saya U Wun (Minthuwun, GBNF) isascholar andadistinguished poet. His mentor is Sayagyi U Pe Maung Tin, who successfully proposed to Rangoon University to establish the Burmese Department. Saya studied at RU and in UK. Saya served as (a) Head of the Translation Department, Rangoon […]
SPHS Sayas (Part Two)
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 17, 2020 • ( Leaveacomment )
Update : December 17, 2020 Brother Clementian Brother Clementian was loved by his former students. When he passed away, the cortege left from SPHS (St. Paul’s High School) to the Tamwe Christian Cemetery. When the cars arrived at the Cemetery for the Burial Service, many cars were still […]
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 13, 2020 • ( Leaveacomment )
Update : December 15, 2020 Interview Irrawaddy Dawn (Poem) At 69ers Golden Jubilee RIT Ah Nu Pyinnya Shin Myar Caption of an article in Weekly Eleven Interview with Tekkatho Moe War Irrawaddy Dawn (Poem) RIT Ah Nu Pyinnya Shin Myar At 69ers Golden Jubilee Caption of an article […]
U Tin Lin
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 6, 2020 • ( Leaveacomment )
Saya U Tin Lin (ChE72) taught at RIT and Singapore. He wasacore organizer for the SPZPs held in Singapore. The following is an excerpt from his memoirs. ၁၉၉၀ မှာကျနော်ကထိကဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဝင်ပြီး ၁၇နှစ်အကြာမှာပေါ့။ အဲဒီနှစ်မှာပဲမန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်တာဝန်ပေးလို့၊မန္တလေးကိုရောက်ရပါတယ်။မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်ဖွင့်နိုင်ရေးလုံးပမ်းနေစဉ်၊ကျောင်းဆေးခန်းအတွက် ဆေးထည့်ဘီဒို၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း၊အုတ်တံတိုင်း၊သီလရှင်ကျောင်း၊ပရိယတ္တိအထောက်အ ကူ၊စာရေးကရိယာ များလှုဒါန်းခြင်းစတဲ့ တပိုင်တနိုင်ဒါနပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုဂဏန်း၊ဆယ်ဂဏန်းဒါနအမှုတို့ကားနေ့စဉ်မပြတ်။ကျနော်တို့တတွေသည်၊ဘုရားပြီးလျှင်သာသနာ့ဝန်ကိုထမ်းရွက်ကြသည့်၊ရဟန်း သံဃာတို့ကိုလှုဒါန်းမှုပြုလေ့ရှိကြပါသည်။ နာမည်ကြီးဆရာတော်နှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့တွင်လှုဒါန်းသူများပေါများကြပါသည်။ သို့ဖြစ်လင့်ကစား၊သာသနာ့ဝန်ထမ်း သီလရှင်များနှင့်သီလရှင်ကျောင်းတိုက်များသို့လှုဒါန်းကြသူနည်းပါးကြသည်။သံဃာတော်ကို(၁၀၀)ကျပ်တန်လှုသူမရှားသော်လည်း၊သီလရှင်ကို(၁၀) ကျပ် တန်လှု သူရှားပါသည်။ကြုံတုန်းတိုက်တွန်း […]
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 2, 2020 • ( 1 Comment )
Update : December 13, 2020 Pansy Thin wrote : ကမြတို့ရဲ့ဖခငျ သင်ျခြာပါမောက်ခ ဦးဘတုတျ ဒီနေ့ ၂-၁၂-၂၀၂၀ ညနေ ၅:၄၃နာရီက လူကွီးရောဂါဖွငျ့ကှယျလှနျသှားပါတယျ။ ဖဖေရှေိစဥျက ဖဖေကေို ဂရုတစိုကျ နဲ့ ဂါရဝပွု စောငျ့ရှောကျသူမြားအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ Memories of Sayagyi Betty Myo (Sayagyi’s eldest child) wrote : ရနျကုနျတက်ကသိုလျကွီးကိုခဈြသောကမြတို့ဖဖေသေညျတက်ကသိုလျရာပွညျ့ပှဲကွီးကိုကွိုဆိုပွီးနောကျနမှေ့ာဘဲကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ဝမျးနညျးစရာကောငျးတာကသူခဈြတဲ့သချြာမိသားစုရဲ့မြှျောလငျ့ခကျြဆန်ဒကိုတော့ဖွညျ့ဆညျးပေးမသှားနိုငျခဲ့ရှာပါဘူး။ ဖဖေကေို့အလေးထားပွီးဖဖေမှေ့ေးနမှေ့ာကငျြးပမဲ့ဆရာကနျတော့ပှဲကိုမပါဝငျနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒီပှဲကိုစိတျအားထကျသနျစှာစီစဥျဆောငျရှကျနတေဲ့သချြာဌာနဆရာ၊ဆရာမမြား၊မြိုးဆကျဟောငျး၊မြိုဆကျသဈသချြာကြောငျးသားမြားရဲ့မတ်ေတာစတေနာကိုဖဖေကေို့ယျစားလှိုကျလှဲစှာ‌ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးပွောကွားလိုပါတယျ။ သချြာမိသားစုအပွငျအခွားဘာသာရပျအသီသီး၊နယျပယျအသီးသီးမှမတ်ေတာတရား၊ဂါရဝတရားတို့ဖွငျ့‌‌ဖေ‌ဖေ့ ပိုဈ တကျလာတိုငျးဆုတောငျးမတ်ေတာမြားပို့ပေးကွသူအားလုံးကိုလညျးအထူးကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။ဖဖေကေို့လာကနျတော့ခငျြပမေဲ့အခှငျ့အရေးမရသှားတဲ့တက်ကသိုလျဘောလုံးအသငျး၊ အငျဂငျြနီယာအသငျးစသညျတို့ကိုလဲဝမျးနညျးစှာကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောခငျြပါတယျ။ ဖဖေကေို့အလေးထား၊ဂရုစိုကျခဲ့တဲ့ဆှမြေိုး၊မိတျသဂျဟအားလုံးကိုလဲ‌ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျရှငျ။ အားလုံးကနျြးမာ၊ခမျြးသာဘေးရောဂါကငျးကွပါစေ။
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 1, 2020 • ( Leaveacomment )
Matriculated from St. Paul’s High School in 1957.His Burmese Saya was U Sein (father of Dr. Soe Win, Retired Rector of YUFL) Composed “Mya Kyun Nyo Nyo” in 1959. Pen name : Maung Ngwe Hlinne Recorded the songafew years later at Myanmar Ah Than with U […]